CIN Khabar बेरोजगारलाई रोजगारी : के काम ? कति पाइन्छ दाम ?
बेरोजगारलाई रोजगारी : के काम ? कति पाइन्छ दाम ? जेठ १५बाट युवाले काम पाउने
स्नेहा कर्ण बिहिबार, जेठ २, २०७६, १२:०९:००
सरकारले ३ महिना अघि घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगारहरुले भर्ने आवेदनको म्याद सकिएको छ । यस अवस्थामा मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले आवेदन संकलन पछि अब अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को सप्तरीको राजविराज नगपालिकामा झन्डै ८ हजार युवाले बेरोजगार आवेदन भरेका नगरपालिकाले जनाएको छ ।
तयार सूचीबाट अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत कसलाई काम दिने भन्ने विषयमा वास्तविक बेरोजगारको छानविन र अद्यावधिकको काम भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक ज्योतिष यादवले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि तयारी भइरहेको र केन्द्रसँग यो विषयमा परामर्श भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पनि बेरोजगारहरुको सूची लिने काम सकिएको छ । करिब ५ हजार आवेदन परेकामा डेढ सयदेखि २ सय युवाले यो वर्ष काम पाउने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
युवालाई रोजगारीमा सहभागि गराउँदै बेरोजगारी अन्त्य गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलापति भट्टले विशेषगरी सार्वजनिक काममा युवालाई रोजगारी दिने हुँदा परेका आवेदन मध्ये वास्तविक बेरोजगारको छानविन गरेर काममा लगाउन गाउँपालिका तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सडक निर्माण, कुलो निर्माण जस्ता क्षेत्रमा बेरोजगार युवालाई काममा लगाउनुपर्ने हुनाले त्यसै अनुसारको तयारी सुरु भएको छ ।
मुलुकको विभिन्न समस्या मध्येको एक बेरोजगारी पनि भएकोले त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सय दिनको काम दिने र काम दिन नसके निर्वाहमुखि भत्ता दिनेगरि ल्याइएको कार्यक्रम यस वर्ष भने ३० दिनमा सिमित हुने भएको छ ।
जेठ १५ गतेबाट मात्रै युवाहरुले काम पाउनेछन् । जसका लागि २ अर्ब ३६ करोड बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यक्रम व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा.लोकनाथ भुषालले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा धेरैमा ३ सय ५० र कममा एक सय जनाले रोजगारी पाउने जानकारी दिनुभयो ।
आवेदन दिँदा जतिले दिएपनि त्यसमध्येका वास्तविक बेरोजगार जो कुनैपनि रोजगारीमा संलग्न छैनन् वा जसको घरमा कोहि रोजगारीमा छैनन् त्यसको पहिचान गरेर मात्रै काम दिइने उहाँको भनाइ छ ।
विशेषगरी सार्वजनिक विकासका काममा रोजगारी दिने हुँदा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै रोजगारी पाउने युवाले पाउने जानकारी दिँदै उहाँले यो वर्ष ६० दिनको काम दिने भनिएपनि समय अभावका कारण ३० दिनमा सिमित भएको बताउनुभयो ।
मुलुकभर करिब ९ लाख युवा बेरोजगार छन् । झन्डै ५ देखि ६ लाख युवा रोजगारी नपाएरै विदेश जान बाध्य छन् । यो बर्ष ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनाले एक महिनाको काम पाउनेछन् । अर्को वर्षदेखि एकसय दिनको रोजगारी वा ५० दिनको भत्ता ५ लाख युवाले पाउनेछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २, २०७६, १२:०९:००